Somaliland: Wasiirro Imaaraadka Carabta u Tagay Qiimaynta Shirkad doonaysa maal-gashiga dekadda Berbera
Home Somali News Somaliland: Wasiirro Imaaraadka Carabta u Tagay Qiimaynta Shirkad doonaysa maal-gashiga dekadda Berbera
Wefti Wasiirro ah oo uu Hoggaaminayo Wasiirka Madaxtooyadda Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa sheegay in ay kulamo kula yeelanayaan dalka Imaaraadka carabta shirkad la yidhaahdo Dubai World, oo ka mid ah sharaa’iga danaynaya inay maal-gashadaan marsadda Berbera.
Weftigaasi waxa kale oo xubno ka ah Wasiirrada Hawlaha guud, Ganacsiga iyo Maareeyaha dekadda Berbera, ayaa maanta socdaal shaqo ugu kicitimay dalka isu-taga Imaaraadka carabta, gaar ahaana magaaladda Dubai.
Sidaasina waxaa lagu sheegay qoraal kooban oo uu Wasiirka madaxtooyadda Xirsi Cali Xaaji Xasan, uu xalay ku baahiyay bogga uu degelka Internet-ka ku leeyahay ee Guusha.com.
“Waxaanu Maanta (shalay) ka soo amba baxay Caasimada Somaliland ee Hargeysa anigoo ku sii jeeda dalka isutaga Imaaraadka Carabta ‘UAE” gaar ahaan magaaladda Dubai. Safarkan oo ay igu wehelinayaan Masuuliyiin ay ka mid yihiin Wasiirka Hawlaha Guud, Gadiidka iyo Guryeynta Mud. Cabdirisaaq Khaliif Axmed , Wasiirka Ganacsiga iyo Maaligashiga Md. Muuse Qaasim Cumar iyo Maareeyaha Dekeda Berbera Eng. Cali Cumar Maxamed (Xoor-xoor).U jeedadda socdaalkayaga ayaa noqon doona in aanu wada hadal iyo qiimayn ku soo samayno shirkad danaynaysa in ay maalgashato dekeda Berbera magaceedana la yidhaahdo Dubai World,”ayuu Wasiirka madaxtooyaddu ku yidhi qoraalkiisa.
Wasiirku waxa uu ku dooday inuu rajaynayo in wada hadalada ay la yeelanayaan shirkadaasi uu fure u noqdo maal-gashi caalami ah oo Somaliland kasbato, waxaanu yidhi “Waxaan rejaynayaa in wada hadalkaasi noogu soo dhamaado is-afgarad iyo is-faham sidoo kalena noqdo mid al-baabka u fura maal-gashi caalami ah oo dalkeenna lagu sameeyo.
Waxaa hubaal ah in guud ahaan dalkeennu u baahan yahay in uu xidhiidh fur-furan la yeesho dalalka jaarka ah iyo caalamkaba, si loo helo maal-gashiyo waaweyn “Macro investment” oo wax badan ka tari kara dhinacyada shaqo- abuurka iyo guud ahaanba horumarka dhinacyadiisa kala duwan. Shacabka Somaliland ee jecel horumarka iyo horusocodka waxaan ugu bushaaraynayaa in talaabadani ay bilow u noqon karto Somaliland cusub oo caalamka la socota.Wa Bilaahi Tawfiiq.”
Somaliland: Madaxweyne Biixi Oo Maanta Dalka Ku Soo Laabanaya Iyo Xog Laga Helay Muuse Biixi Iyo Siciid Deni
Somaliland: Siyaasi Bakayle Oo Eedo Culus U Jeediyey Komishanka Doorashooyinka Qaranka
Somalia: Shirka ugu danbeeya ee Deyn cafinta waxaa la qabanayaa sanadkan 2020ka
Somaliland: Masuuliyiinta Kulmiye Oo Ku Jahawareersan Hanaankii Sharci Ee Ay Bannaanka U Dhigi Lahaayeen Cududda Garabka Isbahaysiga, War-saxaafadeedyo Is-barbar Socdana Ku Dawakhay